“Helo ho an’ny pelaka” i Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
“Helo ho an'ny pelaka” i Tajikistan	Voadika ny 03 Febroary 2013 11:19 GMT
Zarao: Lohahevitra fady ny resaka pelaka ao Tajikistan. Na dia efa ho dimy amby folo taona aza izao no tsy mahavoasazy intsony ny fiarahan’ny mitovy fananahana ao amin’ity firenena, dia mbola vitsy ireo mahazaka ny fisian'izy ireo ao amin’ny fiaraha-monina mitandro ny fomban-drazana. Ankoatra ny fihetsika fankahalana pelaka, lasa lasibatry ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina ireo vitsy mahasahy mampiseho izany fironana ara-pananahana ‘tsy nifanarahana’ izany (pdf). Vokany, mitoetra ho « iray amin’ireo vondrona mikatona sy miafina eo amin’ny fiaraha-monina Tadjika » ireo vavy tia vavy, tia fananahana roa, lahy tia lahy ary ireo niova fananahana (LGBT).
Nisy adi-hevitra faramparany teo tao amin’ny tontolon’ny bilaogy ao amin’ny firenena nahitana ambangovangony mikasika ny dikan’izany atao hoe pelaka (gay) ao Tadjikistan sy hoe ahoana no fiheveran’ny olona ao an-toerana ireo LGBT.
‘Midika ho FANGIRIFIRIANA…’
Nanomboka taorian’ny nanoratan'i [ru] Rishdor mikasika ny voina mahery vaika iray teny amin’ny anjerimanontolo ny adi-hevitra. Nahafantatra ireto mpianatra fa pelaka ny iray tamin’ireo namany ao an-dakilasy. Nanoratra izy hoe:
Noho ny antony maro dia noraisin’ny rehetra ho toy ny fanalam-baraka manokana izany. Tapaka ny hevitra fa tokony homena lesona ity pelaka. Valo tamin’ireo namana ireo no nidaroka azy tao amin’ny trano fandroana. Tena novelesin’izy ireo maharary izy, ka nijininika eran’ny tava sy ny akanjo ny rà
Tao anatin’ireo adi-hevitra maro hafa tao amin’ny bilaogy, dia nandroso hevitra [ru] ny mpamaky iray fa mampiseho fihetsika fanaon'ny olona amin'ireo pelaka ao Tadjikistan izany trangan-javatra izany
Mino aho fa tsy vao voalohany no voavono toy izany ilay lehilahy. Tsy maintsy miatrika fihetsika toy izany hatrany izy raha mbola eto Tadjikistan. Isan’andro. Ary raha handeha hitaraina any amin’ny polisy izy, dia ho roahin’ireto farany, sady handatsa, tsy maintsy miatrika ny fihetsika fampijaliana amin’izay rehetra alehany izy, ary tsy maintsy hisy andian'olona hanenjika azy hatrany, na aiza na aiza.Tena mampalahelo ahy izy.
Nanontany [ru] kosa i Shakha, mpamaky hafa:
Fa nahoana no mitohy eto amin’ny firenentsika izany fihetsika atao amin’ny pelaka izany ? Tsy voasokajy ho heloka intsony ny pelaka eto amintsika, tsy mbola nanasazy ofisialy ny olona noho izay ny fanjakana. Ary efa nanaporofo koa ny siansa ankehitriny fa tsy karazana areti-tsaina afaka sitranina amin’ny fanafody (na toraham-bato na karavasiana) ny fifanelahana…
Namaly [ru] ny lahtsoratr'i Rishdor i Drugoi, bilaogera hafa :
Fantatrao ve ny dikan’izany hoe pelaka eto Tadjikistan ? Tsy misy ratsy kokoa azo sainina !TSY VOASITRAKA NO DIKAN'IZANY HOE PELAKA ! Avy amin’ny olon-drehetra. Izany hoe efa voaozona hitoka-monina sy tsy raharahian'ny hafa, eny fa na dia fianakavianao sy ny namanao aza ; [midika ho] fanebahana avy amin'izy ireo sy ny fangorahany ny maha-anao anao. [Midika] fa handresy lahatra anao izy ireo na hifandresy lahatra, fa aretina io ka mila fitsaboana haingana.
FANGIRIFIRIANA, FIJALIANA, LATSA, IRERY , ary FANILIKILIHANA no hevitr’izany.
Mandrisika ny mpamaky kosa ilay lahatsoratr’ity bilaogera Fragaria izay mitondra ny lohateny hoe « Avelao ny pelaka »
Aoka izay ny fitsabahana ny fiainan’ny hafa… Mianara mandray ny olombelona toy ny olombelona raha ny marina toy ny vehivavy, ny lehilahy, na pelaka… Ekeo amin’ny maha-izy azy ny tsirairay. Mandefera. Fa nahoana ianao no lian-kahafantatra mafy amin’ny safidin’ny olona na te hiaraka amin’ny lehilahy hafa izy na vehivavy ?
Na dia izany aza anefa, ny fanehoan-kevitry ny mpamaky ao amin'ity bilaogy farany indrindra ity ho ahafaha-manamarika fa mbola tsy akaiky ny fanekena ny LGBT ao Tadjikistan.
Fanehoan-kevitra iray avy amin’ireo mpamaky tsy fantatra [ru] :
Na miaina amin’ny vanim-potoana fahiny na ankehitriny isika, izay voarara dia voarara. Tsy tokony hisy ny hanary finoana amin’ny fiheverana ireny olona marary ireny ho anisan'ny fiaraha-monina…
Nilaza [ru], ity bilaogera hafa, Teocrat, ity fa mitovy amin’ny fanekena ny zon’ny « zoophiles » (fanaovana firaisana amin’ny biby) sy ny « pedophiles » (fanaovana firaisana amin'ny zaza) ny fanekena ny zo amin’ny fiarahan’ny mitovy fananahana. Naneho hevitra ihany koa izy fa « raha te ho ekena tahaka ny rehetra ny pelaka, dia tokony hitondra tena tahaka ny rehetra koa izy ».
Lasa lavitra amin'ny tsy fankatoavana ny pelaka ao amin'ny fiaraha-monina tadjika kosa ilay bilaogera Bachai Sako [tj]
Sady tsy Tadjika, no tsy silamo ny mpanelaka. Olona tsy salama izany na biby.
Ao anatin’ny fanehoa-keviny i Mustafo nanoratra hoe [ru] :
Tsy mbola nifankahita tamin'ireny mpanelaka ireny aho teto amin’ny firenentsika. Nefa, raha jerena amin'ireto fanehoan-kevitra ireto, dia helo ho an’ny mpanelaka i Tadjikistan.
Tantaran'ny Azia Afovoany sy Kaokazy farany 1 herinandro izayTajikistanSazian'i Tajikistan ireo mpanakanto mpanitsakitsaka ny lalàm-pifamoivoizana
02 Aogositra 2015AzerbaijanGadra Politikan'i Azerbaijan sy ny Tetipanoron'ny Fitondram-Panjakana
Vakio amin'ny teny русский, Español, Català, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Mediam-bahoakaZon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)